आज नयाँ स्वास्थ्य सचिव नियुक्त हुने संभावना - Health Today Nepal
आज नयाँ स्वास्थ्य सचिव नियुक्त हुने संभावना
December 28th, 2017 समाचार0comments
काठमाडौं, १२ पुष : स्वास्थ्य मन्त्रालयमा रिक्त सचिवको नियुक्ती आज बस्ने मन्त्रीपरिषद्ले गर्ने संभावना बलियो बनेको छ । मन्त्रीपरिषद् सचिवालय स्रोतका अनुसार मन्त्रीपरिषद् बैठकको कार्यसूचिमा स्वास्थ्य सचिव नियुक्ति सम्बन्धी बुदा समावेस गरिएकाले आज मन्त्रीपरिषद् बैठक बस्न सके स्वास्थ्य सचिव नियुक्त हुने छ । गत मंसिर १८ गते उमेर हदका कारण डा. किरण रेग्मी सेवा निवृत भएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयको सचिव पद रिक्त छ ।
लोक सेवा आयोगअध्यक्षको अध्यक्षतामा बसेको बढुवा समितिले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा बाह्रौ तहमा कार्यरत वरिष्ठ चिकित्सकहरु डा.विनोदमान श्रेष्ठ, डा. सुशिल प्याकुरेल र डा. पुष्पा चौधरीको नाम समान्य प्रशासन मन्त्रालय पठाएको स्रोतले जनाएको छ । समितिको सिफारिसमा समान्य प्रशासन मन्त्रालयले नियुक्तीका लागि पठाएका उक्त तिन चिकित्सक मध्ये मन्त्रीपरिषद्ले एक जनालाई सचिवमा नियुक्त गर्ने छ । बढुवा समितिमा लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष, लोक सेवाकै एक जना सदस्य, मुख्य सचिव र समान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव रहन्छन । सिफारिस भएका जो सुकैलाई पनि मन्त्री परिषद्ले नियुक्त गर्न सक्ने प्रावधान छ । यस अघि बढुवा समितिले कार्यसम्पादन र जेष्ठताका आधारमा उपयुक्त उम्मेदवार पठाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको थियो । स्वास्थ्य मन्त्रालयले बाह्रौ तहका तिन र एघारौ तहमा पाँच वर्ष भन्दा बढी सेवा अवधि भएका ८ जना गरि ११ जनाको नाम पठाएको थियो । डा.विनोदमान श्रेष्ठको सेवा अवधि दुई महिना मात्र बाकी रहेकाले उनलाई सचिव नियुक्त गर्ने संभावना न्यून रहेको स्रोतको दावी छ । डा. प्याकुरेल र डा. चौधरी मध्ये एक जना सचिवमा नियुक्त हुने संभावना बलियो रहेको छ ।
यी दुई मध्ये डा.चौधरीलाई बिबादास्पद् चिकित्सकका रुपमा लिइन्छ । २०४८ मा आठौ तहबाट सरकारी से वा प्रवेश गरेकी उनले सरकारलाई जानकारी नै नदिई बेलायतमा मुख्य कार्यालय रहेको स्त्री रोग विशेषज्ञहरुको अन्तर्राष्ट्रिय संगठन फिगोबाट प्रति महिना करिव डेढ लाख रुपैया ( १५ सय अमेरिकी डलर) तलव लिने गरि जनवरी १, २०१५ देखि डिसेम्बरसम्म तीन बर्षे सम्झौता गरेपछि बिबादमा तानिएकी हुन् । जबकी कुनै पनि सरकारी कर्मचारीले दोहोरो सुविधा लिन नपाइने स्वास्थ्य सेवा ऐनमा व्यवस्था छ ।
त्यसैगरि प्रसूति गृहको निर्देशक भएका बेला आर्थिक अनियमितता गरेको पाइएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले डा.चौधरीलाई २०७४ असार २ गते कारवाही गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पठाएको पत्र कर्मचारीसंग मिलेमतो गरि स्वास्थ्य सचिव र मन्त्रीसम्म पुग्न नै नदिएर लुकाएको आरोप डा. चौधरीमाथि छ । डा.चौधरीलाई अंगिकृत नागरिक भएको र उमेर घटाएर नागरिकता बनाएको आरोप पनि छ । आफ्नो उमेर र नागरिताका बिषयमा मिडियामा आएका समाचारका बिषयमा आफूले चाडै पत्रकार सम्मेलन गर्ने उनले बताएकी छन् । यसका साथै सेवा अवधिमा कहिल्यै पनि राजधानी बाहिर नगएको, राजधानी बाहिरका जिल्लाको स्वास्थ्यकर्मीका समस्या नबुझ्ने, एनजिओ र आईएनजीओसँग आर्थिक चलखेलमात्र गर्ने, कर्मचारीसँग रुखो व्यवहार गर्ने जस्ता दर्जनौ आरोप डा. चौधरीलाई छन् । प्रसूति गृहको निर्देशकपछि उनी परिवार स्वास्थ्य महासाखाको निर्देशक भएकी थिइन । त्यसपछि तत्कालिन स्वास्थ्य मन्त्री रामजनम चौधरीले नियम मिचेर उनलाई स्वास्थ्य सेवा विभागको निमित्त महानिर्देशक बनाएका थिए । महानिर्देशक भएका बेला कार्यक्षमता अभाव र कर्मचारी सरुवामा ठूलो आर्थिक चलखेल गरेपछि तत्कालिन स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाले डा.चौधरीलाई महानिर्देशकबाट हटाएर मन्त्रालय सरुवा गरेका थिए ।
सचिवका अर्का प्रतिस्पर्धी डा.प्याकुरेल सेवा अवधिको ३८ वर्ष राजधानी बाहिर बसेर एकै पटक बाह्रौ तहमा बढुवा भएपछि मन्त्रालय छिरेका हुन् । उनलाई देशका ५० भन्दा बढी जिल्लामा बसेर काम गरेको अनुभव भएको, स्पष्ठ वक्ता र निर्णय क्षमता भएको चिकित्सकका रुपमा चिनिन्छ । केन्द्रमा नबसेकोले उनलाई मन्त्रालयमा हुने नीतिगत र प्रशासनिक अनुभव भने कम रहेको मन्त्रालयका अधिकारी बताउछन् । रेडियोग्राफरबाट स्वास्थ्य सेवा प्रवेश गरेका डा. प्याकुरेलले विभिन्न जिल्लामा मेडिकल अफिसरदेखि जिल्ला स्वास्थ्य प्रमुख भएर जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । पछिल्लो पटक मध्यपश्चिम, पूर्वाञ्चल र अन्तमा सुदूरपश्चिम क्षेत्रिय स्वास्थ्य निर्देशनालको निर्देशक भएर जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । उनलाई प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रदेखि जिल्लासम्म, अञ्चल अस्पतालदेखि क्षेत्रिय निर्देशनालयसम्मको सबै गाह्रो साह्रो थाहा छ । स्वास्थ्यमा कार्यरत दातृ निकायसँग कसरी जनताको हितमा काम गर्न सकिन्छ भन्ने अनुभव उनीसंग रहेको स्वास्थ्यकर्मी बताउछन् ।
जहिले पनि खुला प्रतिस्पर्धाबाट बढुवा हुदा बाह्रौ तहसम्म पुगेका डा. प्याकुरेल बाह्रौ तहमा मात्र फाइल बढुवामा परेका हुन्, त्यो पनि प्रकृयागत वाध्यताले । किनकी बाह्रौं तहमा फाइल बढुवा मात्र हुन्छ । दुर्गममा बसेर जनताको सेवा गरेकै परिणाम स्वरुप राज्यबाट सम्मान पाएको, जनताको आशिर्वाद पाएको र सबैभन्दा ठूलो आत्मसन्तुष्टि पाएको डा.प्याकुरेल बताउँछन । दुर्गममा काम गरेकै नम्बरका कारण अहिले आफू स्वास्थ्य सेवाको सबैभन्दा माथिल्लो आहोदामा पुगेकोमा आफूलाई गर्व लागेको उनी सुनाउछन् । यी प्रतिस्पर्धी मध्ये स्वास्थ्य मन्त्रालयको सचिवको पद कसको जिम्मामा पर्ने हो त्यसको लागि भने मन्त्रीपरिषद्को निर्णय कुनै पर्ने अवस्था छ । प्रधानमन्त्री देउवाले जसलाई नियुक्त गर्न चाह्यो उही सचिव हुने अवस्था रहेको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । ती अधिकारीले भने, ‘स्वास्थ्य मन्त्रीले चाहेर मात्र केही हुदैन । प्रधानमन्त्रीले चाहेको व्यक्ति हुन्छ । ’ विभागिय मन्त्रीको कुरालाई प्रधानमन्त्रीले अस्विकार गर्न सक्छ । केपी ओली नेतृत्वको सरकारका स्वास्थ्य मन्त्री रामजनम चौधरीले डा. पदमबहादुर चन्दलाई सचिव बनाउने प्रस्तावलाई ओलीकै हस्तक्षेपका कारण डा. सेनेन्द्र उप्रेति स्वास्थ्य सचिव भएको नजिर रहेको ती अधिकारीले बताए । उनले भने, ‘ अहिलेको अवस्थामा सचिव नियुक्तीमा प्रधानमन्त्रीले जसलाई बनाउन चाह्यो त्यही हुन्छ । प्रधानमन्त्रीले चासो नदेखाए जो पनि हुन सक्छ । यो कुनै राजनीतिक नियुक्ती होइन । ’
Previous article रक्सी खाएर यौन सम्पर्क
Next article कारवाही गर्नु पर्नेलाई पुरस्कार